Chii chinonzi AppArmor uye kuti chinovandudza sei kuchengeteka muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kwenguva yakareba, vashandisi veLinux vaive vakaita sevapanduki venhau yenguruve nhatu diki. Kunzwa kwekunyepa kwakatitungamira kuti titende kuti isu takachengeteka kubva kumatambudziko ezvekuchengetedza ayo maWindows aigara achibatwa.
Chokwadi chakatiratidza kuti isu hatina kukuvadzwa sezvataifunga. Kunyangwe, kutaura chokwadi, huwandu hwekuremerwa hwakataurwa hwakawanikwa mumaragi ekuchengetedza macomputer uye, mamiriro ezvinhu anodikanwa kuti atore mukana iwoyo haapo munyika chaiye, kuchine matambudziko akakwana kuti tiregedze kurinda kwedu.
1 Linux kernel chengetedzo matanho
1.1 Iwo musimboti werombo shoma
1.2 Zvinotenderwa Kupinda Kudzora
2 Chii chinonzi AppArmor?
Linux kernel chengetedzo matanho
Kubvumirana kwese pakati pehunyanzvi hwekuchengetedzwa kweIT ndeyekuti matanho akagadzirirwa kudzivirira kupinda kusingatenderwe muhurongwa hwakadai semadziro emoto kana nzira dzekupinda mukati hadzichakwanise kumisa kurwiswa kwakanyanya. Izvo zvinodikanwa kumisikidza mutsara mutsva wekudzivirira uyo, mune chiitiko chekupinda kusingatenderwe kupinda muchirongwa, haibvumidze uyo anopinda kuita chero chinokuvadza.
Iwo musimboti werombo shoma
Nheyo yedzikomberedzo inosimbisa seyakakosha mutemo wekuchengetedza uyo vashandisi vecomputer system vanofanirwa kungogashira yakatemwa seti yemaropafadzo uye zviwanikwa izvo zvakakosha kuti vaite basa ravo chairo. Nenzira iyi, kushandiswa kusiri iko kana kwekuregeredza kwekushandisa kunoderedzwa kana kudzivirirwa kubva pakuve vector yekupinda yekurwisa kwemakomputa.
Kwenguva yakareba, ma linuxers akavaka kuvimba kwedu mukuchengetedzwa kwesystem yedu pane imwe kernel mashandiro anozivikanwa seDiscretionary Access Control. Discretionary Access Kudzora inosarudza sisitimu zviwanikwa vashandisi uye maapplication anogona kuwana.
Dambudziko nderekuti huwandu hwesarudzo hwaro hwakaganhurirwa uye kuti, sekuratidzwa kweshoko discretionary, vamwe vashandisi vane mvumo dzakaringana vanogona kugadzirisa izvo zvingangoshandiswa nevashandisi vemakomputa.
Zvinotenderwa Kupinda Kudzora
Inosungirwa Yekuwana Kudzora inosiyana neDiscretionary Access Kudzora mune izvo iyo inoshanda sisitimu inodzora zvinoitwa nemaapplication zvichienderana nemirairo yakatarwa nemaneja wehurongwa uye kuti vamwe vashandisi havagone kuchinjisa.
MuLinux kernel iri ibasa reLinux Security Subsystem Module iyo inopa akasiyana maitiro anogona kukumbirwa kubva kumaturusi seaya ataurwa muchinyorwa chino.
Chii chinonzi AppArmor?
AppArmor inoshandisa iyo Inosungirwa Kuwana Kudzora paradigm kusimudzira kuchengetedzeka kwekuparadzirwa kweLinux. Iyo inovimba neLinux Security Subsystem Module yekumisa hunhu hweanoshanda ega maererano nemitemo yakatarwa nemaneja.
Aya madhairekisheni anoratidzwa muchimiro chemafaira ezvinyorwa akajeka anozivikanwa semaprofiles. Kutenda kumaphrofayli, manejimendi wehurongwa anogona kudzora kupinda kumafaira, mamiriro ekubatana pakati pezvakaitwa, kumisikidza mune iyo faira system inogona kukwirwa, kudzikisira kuwana network, kuona kugona kwechikumbiro.uye zvingani zviwanikwa zvaunogona kushandisa. Mune mamwe mazwi, chimiro cheAppArmor chine chena yemaitiro anogamuchirwa pachishandiswa chimwe nechimwe.
Zvakanakira nzira iyi ndeizvi:
Iyo inobvumidza manejimendi kuti ishandise musimboti werombo shoma kune maapplication. Kana chiitiko chekuti chikumbiro chakakanganiswa, hachizokwanisa kuwana mafaera kana kuita zviito kunze kweyakagadzwa seyakajairika paramende yekushanda.
Iwo ma profiles akanyorwa mune mutungamiriri ane hushamwari mutauro uye akachengetwa munzvimbo dzaunogona kuwana zvirinyore.
Iko kushandiswa kwemamwe profiles kunogona kugoneswa kana kuremadzwa zvisinei nezvinoitika kune mamwe maporofita. Izvi zvinobvumidza manejimendi kudzimisa uye kugadzirisa chaiyo profil yechimwe chishandiso pasina kukanganisa mashandiro eiyo yese system.
Muchiitiko chekuti chishandiso chinoedza kuita chero chiito chinopesana neicho chakamisikidzwa muprofita inoenderana, chiitiko chakatemwa. Nenzira iyi maneja anogamuchira yambiro yekutanga.
AppArmor haisi kutsiva kweDiscretionary Access Control, kureva kuti, haugone kubvumidza chimwe chinhu chinorambidzwa, asi unogona kurambidza chimwe chinhu chinotenderwa.
AppArrmour inouya nezvimwe zvishandiso pre-yakaiswa pane makuru maLinux kugoverwa, uye iwe unogona kuwana zvimwe muzvinyorwa.
Unogona kuwana rumwe ruzivo pa peji yepurojekiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chii chinonzi AppArmor uye kuti chinovandudza sei kuchengeteka muLinux
Zviri AppArmor kwete nhumbi dzokurwa nadzo …… .👊👊👊👊👊👊👊👊😡😡😡😡😡😡😡
Pindura kuna Fantasmon
Chokwadi. Pandinongogona ndinogona kuzvigadzirisa